Ụdị akpa (CGH)
Ụdị akpa (XG)
Ground Hanging Point Abu Agbagọkwa (XT)
Aluminom anchoring clampPA-1500-2000
Ụdị Bolt (NLL)
Ụdị Bolt (NLD)
Ụdị hydraulic (NY)
NXJG (ụdị wedge)
Ụdị mkpara dọkpụrụ (NXJ)
Ụdị wedge (NJJ)
Yoke Plate L Ụdị
Ọdụ ụgbọ mmiri (BLMT Series)
Mkpọgide Groove Parallel (JB-JBL-JBT-JBTL)
Mkpọgide Puncture (JJC-JJCD)
oriọna / chaja enwere ike ibugharị
Ọkwa na nkwusioru nke usoro oriri ike n'usoro
Municipal Development and Reform Commission (energy bureau), provincial, local ike (ike ọkọnọ): ebe October na-amalite n'usoro ike ngwọta, anyị n'ógbè mmepe na mgbanwe ngalaba na niile etoju na n'ókèala n'okpuru ike na-edu ndị otu kọmitii na ọchịchị, ka. ...
Kedu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ntinye ọkụ eletrik?
N'ikwu okwu n'ozuzu, ihe ntinye ọkụ bụ nke ụlọ ọrụ ọkụ eletrik, na ngwaahịa nke ngwa ọkụ n'ozuzu na-eji eriri ọkụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọkụ. Ahịrị ike a na-eji na ngwaahịa ọla n'ozuzu nwere mgbanaka nghọta U-ụdị, mgbanaka isi bọọlụ, clip wedge, clip tensioning, mgbanaka ndọtị, han...
N'ihi oke ike, a ga-emetụta ụfọdụ ahịrị mmepụta, yana ndị na-ebubata ga-emetụtakwa. O siri ike ịchịkwa oge nhazi akụkụ, electroplating, pickling na njikọ ndị ọzọ, na okirikiri nke akụkụ ọkọnọ ụkọ ga-abawanye, na-eduga na ndọtị nke nnyefe t ...
leta ọkwa mgbanwe ọnụahịa ngwaahịa
site admin na 21-10-12
Ezigbo ndị ahịa, Daalụ maka nnabata gị na ntụkwasị obi na ngwaahịa anyị, anyị ga-achọ igosipụta ekele miri emi maka nkwado na nkwado nke azụmaahịa anyị n'oge gara aga. N'ihi mgbanwe na nso nso a n'ahịa ahịa nke akụrụngwa, ọnụ ahịa ngwaahịa anyị na-arị elu. Iji kpoo ...
Akụrụngwa na-arị elu
Ka anyị hụ ole akụrụngwa agbagoro. Ọla kọpa dị pasent 38, plastik 35 pasent na aluminom 37 pasent, dị ka data gọọmentị si kwuo.Iron dị elu pasent 30. Ugo dị elu 30 percent. Alloy ọhụrụ bilitere 48 pasent. Igwe anaghị agba nchara. ígwè elu 45 percent. Gịnị bụ isi ihe kpatara na ...
Ụbọchị Mba 2021
The People's Republic of China tọrọ ntọala na October 1, 1949 National Day bụ a mba ezumike nke obodo guzobere iji na-echeta mba n'onwe ya. Ha na-abụkarị nke mba nnwere onwe, bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado nke iwu, ụbọchị ọmụmụ nke isi obodo ma ọ bụ . ..
2021 Asia Power & Electrician & Smart Grid ngosi ga-eme na Guangzhou Pazhou China Import & Export ngosi site na Septemba 23 ruo 25
Isonye na ihe ngosi a ekerewo òkè dị ukwuu n'ịkwalite akara na ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị, meekwa ka ụlọ ọrụ anyị bụrụ onye ama ama na ụlọ ọrụ na-etinye ọkụ eletrik. Iji sonye na ihe ngosi a nke ọma, ndị ọrụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ zuru oke ...
Ememme etiti mgbụsị akwụkwọ obi ụtọ sitere na Xinwo Electric
site admin na 21-09-18
Obi ụtọ n'etiti oge mgbụsị akwụkwọ site na Xinwo Electric Mee ezigbo ọchịchọ ịchọrọ gị obi ụtọ ugboro ugboro, zipu mmetụta dị ebube na-achọ gị ihe niile gburugburu, zipu ozi dị mkpirikpi iji chọọ gị obi ụtọ. ...
Iji mee ka njikwa nchekwa ọkụ nke ụlọ ọrụ Xinwo sikwuo ike, kwalite mmata nchekwa ọkụ nke ndị ọrụ, melite ikike njikwa ọkụ ọkụ na ikike mgbapụ mberede.Na mmalite nke Septemba, ụlọ ọrụ na-agbapụ ...
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-ahazi kwụ n'ahịrị maka ọgwụ mgbochi COVID-19
site admin na 21-08-24
Ekele dịrị mba ahụ, ekele maka nnọkọ ahụ, ka ndị nkịtị nwee ike nweta ọgwụ mgbochi n'efu.
Mpaghara Henan nwere oke idei mmiri, ọdachi na-emere onwe ya enweghị obi ebere, ịhụnanya dị ukwuu na-enweghị oke.
"Xinwo Electric" ga-aga n'ihu na-aṅa ntị na nchịkwa ide mmiri mpaghara na ọnọdụ enyemaka na Henan, ma mee ike anyị niile iji nyere aka mee ka idebe mmiri na mgbake mgbe ọdachi gasịrị. Ka ugwu na osimiri dikwa nma ka uwa dikwa nma
Iji meziwanye arụmọrụ ọrụ zuru oke nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Iji meziwanye arụmọrụ ọrụ zuru oke nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, meziwanye nkà na-arụ ọrụ nke ndị ọrụ na ọkwa nke ngwaahịa ngwaahịa, ka e wee nwee ike ịkwalite ahụmahụ na nkuzi na-agbakọ ngwa ngwa, ma kwalite njikọ na centripetal ike nke ndị ọrụ na. ngwaahịa...